Ungayithenga kanjani i-anabolic steroids -Njengoba idla
/Imibuzo Evame Ukubuzwa
Siyabonga ngokuxhumana nathi! Sizokuxhumana nawe maduzane, buyela ku ikhaya ikhasi noma ubone okuningi imikhiqizo.
Ungumkhiqizi noma inkampani yokuhweba?
Sicela uthumele uhlu lokuthenga ngokuthenga nge-imeyili esemthethweni (king@aasraw.com) futhi isaphulelo sizohlinzeka, kanye nesikhathi sokukhokha.
Ukukhokha kwenzelwe umamukeli wephasela nekheli elinikeziwe.
Izimpahla zizonikezwa ngenombolo yokulandelela, isithombe sephakheji, inombolo yokulandela kanye nosuku lokufika olulinganisiwe.
Impahla etholakele futhi inikeze imibono.
Ungaqala kanjani ama-oda futhi wenze izinkokhelo?
Ungasithumela i-oda lakho lokuthenga uma unayo, noma uthumele isiqinisekiso esilula nge-imeyili noma nguMphathi wezokuhweba, khona-ke sizokuthumela i-Proforma Invoyisi ngemininingwane yethu yasebhange ukuqinisekisa kwakho ukukhokha njengezicelo zakho.
Yebo, imikhiqizo ethile ingathunyelwa njengezimpendulo zamahhala, kodwa uma ukhokha izindleko zokuthumela.
Indlela yokuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo ngaphambi kokubeka ama-oda?
I-COA, i-HPLC, i-HNMR iyatholakala.
Amaphepha okuvivinywa ngamakilabhu wesithathu azonikezwa isikhathi esithile.
Indlela yokuqinisekisa ukuthi imali yami iphephile?
Yonke imiyalo yethu i-powder eluhlaza kungabuyiselwa ngaphambi kokuba izimpahla zithunyelwe.
Ngayo yonke inkokhelo eya ku-AASraw, iqinisekisiwe ngokuhoxisa, ukukhokha, ukudlulisa, noma yini esingayenza phakathi neminyaka ye-5.
Kuthiwani ngesikhathi sokulethwa?
Ngaphakathi kwe-1 ~ izinsuku ezingu-3 ngemuva kokukhokha okuqinisekisiwe. (Iholide yamaShayina ayifakiwe).
Ingabe kukhona isaphulelo?
Yebo, ngenxa yobuningi obukhulu, sisekela njalo ngentengo engcono.
Ungakwazi yini ukuqinisekisa ukutholakala kokutholakala?
Izinto zethu eziluhlaza ku-wareshouse zahlelwa futhi zilawulwa uhlelo, oluzoqinisekisa ukuhlinzeka ngesikhathi.
Awazi yini ulwazi lomkhiqizo?
Ukuze uthole imininingwane yomkhiqizo, ungabona wethu imininingwane yomkhiqizo futhi izihloko zebhulogi Kuyoba nezimpendulo ezinhle
Imikhiqizo edayiswa kakhulu
I-Lapatinib powder (i-231277-92-2)
I-Mibolerone powder (i-3704-9-4)